राम्रो काम प्राप्त गर्न योजना गर्ने सबैलाई, एक रिजुम छ कि बुझ्नुहुन्छ अभिन्न भाग यो प्रक्रिया। यो कागजात, तपाईं आफै, शो को पहिलो प्रभाव सिर्जना गर्न र सबै आफ्नो सकारात्मक गुणहरू, सद्गुण र कौशल बताउन सक्नुहुन्छ धन्यवाद छ। ठ्याक्कै यो स्थिति प्राप्त गर्न - आफ्नो सपना भने तपाईं आफ्नै CV कार्यालय प्रबन्धक पाउन सक्नुहुन्छ।
म कार्यालय प्रबन्धकको स्थिति किन फेरि गर्नुपर्छ?
पहिलो हामी तपाईंलाई एउटा रिजुम आवश्यक किन बुझ्न आवश्यक छ। तपाईं कुनै पनि स्थिति को लागि लागू गर्नु अघि, कुनै पनि कम्पनी को टाउको पत्ता लगाउन आफ्नो कम्पनी मा एक खाली स्थानको लागि लागू हुन्छ जो कर्मचारी हो। यस मामला मा यो तपाईं आफ्नो सबै प्रतिबिम्बित गर्न सक्छन् जो एक काम गर्न रिजुम सिर्जना गर्न धेरै सुविधाजनक छ पेशेवर गुणहरू, त्यसैले कौशल, क्षमता, र। डी
के ठीक रिजुम लिखित सक्छ?
यसलाई गलत गरे होने, आफ्नो खराब पक्ष उहाँले काम को स्वागत को लागि तयार छैन कि, उदाहरणका लागि, देखाउन सक्छौं कार्यालय प्रबन्धकको स्थिति लागि आवेदक। यो मुख्य लागि आफ्नो कम्पनी अनुतरदायी मान्छे आवश्यक कि मनन गर्न एक अवसर हुनेछ। त्यसैले, एक काम रिजुम आफ्नो उद्यम गर्न यसको सान्दर्भिकता र उपयोगिता मा नेता विश्वस्त रूपमा यति माथि कोरिएका गर्नुपर्छ। तपाईं कम्पनी बस अपरिहार्य कर्मचारी बन्न छ।
नमूना रिजुम संचालन व्यवस्थापन राम्रो-तिर्ने काम अभ्यास दाबी गर्ने हरेक भविष्यमा कामदार मदत गर्न सक्षम हुनेछ।
तपाईं कसरी आफूलाई लागू गर्नुपर्छ?
काम संचालन व्यवस्थापन मा एक रिजुम सिर्जना गर्न, तपाईं रिपोर्ट नै जान्नु आवश्यक:
पहिलो कुरा एक नियोक्ता उहाँले साथै जसको रिजुम उहाँले अध्ययन, भविष्यमा संग व्यवहार गर्नुभयो गरिनेछ हुन सक्छ कोसँग थाहा गर्न आवश्यक छ। तपाईंको पूरा नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्।
मोबाइल फोन, ई-मेल र कार्यालय प्रबन्धकको स्थिति को लागि हो यो संस्था को घटना मा तपाईं अन्य संचार: त्यसपछि यसलाई आवश्यक आफ्नो जन्म, निवास स्थान, साथै आफ्नो सम्पर्क जानकारी को वर्ष सूचित गर्न छ।
त्यसपछि तपाईं पछि लाग्दा छन् लक्ष्य नाम। यो छ - एक ठाउँ जो तपाईं लागू गर्दै हुनुहुन्छ। यस मामला मा, कार्यालय प्रबन्धक।
अर्को वस्तु तपाईं शिक्षित थिए जसमा संस्था को नाम हुनुपर्छ। विशेषता लेख्न नबिर्सिनुहोला।
सारांश, एक काम कार्यालय प्रबन्धक आफ्नो समावेश गर्न पक्का हुन अनुभव यस क्षेत्रमा। साथै, तपाईंले कर्मचारी काम तपाईँको अन्तिम स्थान, आफ्नो काम शीर्षक, र ग्रहण र रोजगारीको समापन मिति नाम बताउन पर्छ।
आफ्नो कौशल को सूची - कार्यालय प्रबन्धकको स्थिति लागि रिजुम अभिन्न भाग।
तपाईं भन्ने महसुस भने व्यक्तिगत गुणहरू कुनै पनि कार्यालय प्रबन्धक मा उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने, यो रिपोर्ट।
तपाईं कुनै पनि पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ भने, प्रमाणपत्र, पाठ्यक्रम लिए र जस्तै, आफ्नो उपस्थिति संकेत गर्छ।
संचालन व्यवस्थापन फेरि सुरु। उदाहरणका
त्यसैले तपाईं एक प्रतिष्ठित काम प्राप्त गर्न निर्णय गर्नुभएको छ। आफ्नो प्रस्तुति जस्तो हुनुपर्छ कसरी थाहा गर्न, यो CV कार्यालय प्रबन्धक अध्ययन गर्न, र यसको मस्यौदा के वस्तुहरू संकेत गर्नुपर्छ सम्झना आवश्यक छ। यो पेसा वृद्धि गर्न चाहन्छ जो हरेक कर्मचारी लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले, कसरी "कार्यालय प्रबन्धक" को स्थिति प्राप्त गर्न? सारांश (मास्को - जो पनि यस प्रतिष्ठित स्थिति शहर) हुनेछ स्पष्ट यस्तो कागजात कसरी लेख्न बुझ्न एउटा काल्पनिक उम्मेदवार को।
1 Sergeev Nikolay Vasilevich।
जन्म 2. मिति: जुन 11, 1975
निवास स्थान:। मास्को Lomonosov संभावना, 84 वर्ग एम 79।
भीड। Tel। (906) 555-88-99।
3. उद्देश्य: यस हुलाक कार्यालय प्रबन्धक प्राप्त गर्न।
4 शिक्षा: मास्को राज्य उड्डयन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। उहाँले "अर्थशास्त्र र व्यवस्थापन" मा एक डिग्री संग स्नातक। स्नातक गरेको डिग्री।
5 अनुभव: OOO "समर्थन।" जुन 2007 - जनवरी 2015 निजी सचिव निर्देशक गर्न।
6 प्रो कौशल: पीसी प्रयोगकर्ता, म एमएस शब्द, एमएस एक्सेल, पावरपोइन्ट, इन्टरनेट, लोटस नोट्स काम गर्न सक्षम छु। पूर्ण अंग्रेजी र जर्मन बोल्ने।
7 जिम्मेवारी, पहल, मिलनसार, रचनात्मक, संगठित, अर्थपूर्ण मानिस। निर्देशन समसामयिक सबै कार्यहरू र आवश्यकताहरु प्रदर्शन रही छैन।
8 2010 - प्रशिक्षण "मली" को व्यापार केन्द्र मा "सर्वश्रेष्ठ कार्यालय प्रबन्धकहरू लागि स्कूल"।
नमूना रिजुम संचालन व्यवस्थापन बारेमा सही जानकारी प्रस्तुत गर्न हरेक भविष्य कर्मचारी मदत गर्नेछ।
एक रिजुम को तयारी मा के बचा गर्नुपर्छ?
त्यहाँ कार्यालय प्रबन्धकको स्थिति लागि रिजुम को तयारी मा छलफल हुनुपर्छ भनेर धेरै अंक हो। यो असर गर्न सक्छ भनेर आफ्नो भविष्य क्यारियर घातक गल्ती बनाउन हुनेछ।
हिज्जे र विराम त्रुटिहरू नगर्नुहोस्। यो एक लापरवाह र नजान्ने मानिस रूपमा खराब प्रभाव सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
काम सबै अघिल्लो स्थानहरू वर्णन छैन। तपाईंले पोस्ट केवल एक अन्तिम बिन्दु।
झूटा व्यक्तिगत डाटा निर्दिष्ट नगर्नुहोस्।
हाकिमहरूले तपाईं अघिल्लो जब बायाँ किन कारण आवश्यक छैन।
जब तपाईं ध्यान के गर्नुपर्छ एक रिजुम लिख?
कार्यालय प्रबन्धकको स्थिति आफ्नो रिजुम लागि क्रममा तपाईं धेरै अंक ध्यान गर्नुपर्छ, सबै अरूबाट फरक थियो:
ध्यान दिएर यसलाई पुन: पढ्न, कुनै पनि प्रकारको त्रुटिहरू को हटाउनु।
आफ्नो रिजुम व्यापार शैली लेखिएको गरिएको निश्चित गर्नुहोस्।
Brevity - प्रतिभा को बहिनी, तर यो मामला मा। को कर्मचारी उहाँले काम गर्न लिन जाँदै गर्नुपर्छ मानिस कस्तो प्रकारको बुझ्न आवश्यक छ।
कार्यालय प्रबन्धकको स्थिति उम्मेदवार competently आफूलाई प्रस्तुत गर्न मद्दत गर्नेछ लागि नमूना रिजुम। तपाईं यसलाई सही लेख्न भने, र कठिनाई बिना राम्रो तिर्ने काम प्राप्त। प्रायजसो, मात्र तपाईं आफ्नो को भाग्य निर्भर, त्यसैले आफ्नो विचार भेला र प्रतिभा को एक अविस्मरणीय प्रस्तुति तयार!
रिजुम मा व्यावसायिक कौशल: योगों को उदाहरण
व्यक्तिगत चालक फेरि सुरु: नमूना
"Maynkraft" को प्रशंसक लागि: कसरी सुन्दर घर निर्माण गर्न?
मिनिबस "टोयोटा हेस" - थप विकास गर्न एक दृश्य संग सहज यात्री परिवहन
मुख्य मालिकहरुलाई 'Terraria'
घाउ लागि पहिलो सहायता
Stalingrad युद्ध। युद्धमा को सहभागीहरू: इतिहास र रोचक तथ्य को सूची
मुख मा एसिड - कारणहरू र उपचार
Anovulatory चक्र: यो के हो र कि यो व्यवहार गर्न आवश्यक छ?
गुप्तचर शृंखला "ओल्गा Ryazantseva": अपराध र प्रेम